B2C र B2B व्यवसायहरूमा सामाजिक मिडियाको प्रभाव वा प्रभावको अभावको बारेमा धेरै कुराकानी छ। यसको धेरै जसो एट्रिब्युसनमा कठिनाईको कारण डाउनप्लेड छ विश्लेषण, तर यसमा कुनै श doubt्का छैन कि व्यक्तिहरूले सामाजिक नेटवर्कहरू खोजी र सेवाहरू र समाधानहरू पत्ता लगाउन प्रयोग गरिरहेका छन्। मलाई विश्वास गर्नुहुन्न? अहिले नै फेसबुक हेर्नुहोस् र सामाजिक सिफारिशहरूको लागि सोध्ने व्यक्तिको लागि ब्राउज गर्नुहोस्। म तिनीहरूलाई हरेक दिन देख्छु। वास्तवमा उपभोक्ताहरू सामाजिक मीडिया रेफरलको आधारमा खरीद गर्ने संभावना %१% बढी हुन्छ।
सुन्दै - सम्भाव्यता र ग्राहकहरूलाई अनलाइन प्रतिक्रिया गर्न सामाजिक मिडिया निगरानी गर्न तिनीहरूसँग एक विश्वसनीय सम्बन्ध बनाउनको अविश्वसनीय माध्यम हो। यो तिनीहरूमा सिधा तपाइँसँग बोल्दै सीमित हुनु हुँदैन। तपाईं आफ्नो कर्मचारीहरूको नाम, तपाईंको ब्रान्ड, र तपाईंको उत्पादन नाम को कुनै उल्लेख को लागी सुन्नु पर्छ। यसले तपाईंलाई बिक्री सम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ दिन, तपाईंको अनलाइन प्रतिष्ठा सुरक्षित गर्न, र तपाईंको सम्भावना र ग्राहकहरूसँग विश्वास जगाउँदछ जुन तपाईं कम्पनीको प्रकार हुनुहुन्छ जुन दुबै ख्याल राख्दछ र सुन्नुहुन्छ। % 36% मार्केटरहरूले # ट्वीटरमा ग्राहकहरू अधिग्रहण गरेका छन्
संलग्न गर्दै - यदि तपाईं केवल बोल्दा बोल्नुहुन्छ, वा त्यहाँ बिक्री अवसर छ भने - तपाईं कस्तो प्रकारको कम्पनी हुनुहुन्छ भन्ने झलकको साथ सोशल मिडिया प्रदान गर्नबाट हराउनुहुन्छ। क्युरेटिंग सामग्री र तपाइँको सम्भावना र ग्राहकहरु लाई चासो को लेख साझा गर्न को लागी उनीहरु मा विश्वास र अधिकार निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईंको ग्राहकहरूलाई सफल हुन मद्दतले तपाईंको सफलता सुनिश्चित गर्दछ, केवल तिनीहरूको होइन!
आश्चर्यजनक लेख डगलस! तपाईले दिनु भएका सुझावहरू लागू गर्नुपर्नेछ तपाईको व्यवसायलाई अनलाइन विज्ञापन गर्ने बेला। पोष्टिंग पर्याप्त छैन। तपाइँको श्रोताको कुरा सुन्नु र उनीहरूसँग संलग्न हुनु महत्त्वपूर्ण छ ताकि तपाइँ उनीहरूको चासो जान्न सक्षम हुनुहुनेछ। यदि तपाईंलाई तिनीहरूको रूचि थाहा छ भने, तपाईं आफ्ना लक्षित ग्राहकहरूलाई पहिचान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। धेरै मार्केटरहरू सफल व्यवसायका कारण ग्राहकहरू छन् जुन उनीहरूले सोशल मिडिया मार्फत फेला पारेका छन्। यो धेरै जानकारीपूर्ण पोस्ट को लागी धन्यवाद!
निश्चित रूपमा यी चीजहरू कार्यान्वयन हुनेछ। मेरो मतलब, मैले मेरो बजार अभियानको हिस्साको रूपमा सामाजिक मिडिया प्रयोग गरिरहेको छु र यसको लागि सही रणनीतिहरू सहित, अहिले सम्म यो व्यवसायको लागि ठूलो काम गरिरहेको छ। तर म आफैलाई सीमित गर्दिन त्यसैले तपाईंको यो पोष्टले मलाई यस किसिमको रणनीतिमा अझ राम्रो गर्न मद्दत गर्दछ।